CIN Khabar बजेट माग्दै सिंहदरबारमा सांसदहरुको लर्को
बजेट माग्दै सिंहदरबारमा सांसदहरुको लर्को धारा, पानी, बाटो र विजुली प्राथामिकतामा
केशव भुल बुधबार, जेठ १, २०७६, ०३:४६:००
काठमाडौं । बैशाख महिनाको अन्तिम दिन, चर्को घाम लागिरहेको छ । बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा संसदको बैठक चलिरहेको छ । तर बैठक छाडेर सिंहदरबार भित्रका हरेक मन्त्रालयमा सांसदको ओहोर-दोहोर उत्तिकै देखियो । निकै हतारमा देखिनु भएका दैलेख क्षेत्र नम्बर एकका सांसद पार्वती बिसुन्खे राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बाहिरिनुभयो ।
बाहिरिए लगत्तै सीआइएनसँग उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिले धेरै मन्त्रालयमा गइसकेको छु, राष्ट्रिय योजना आयोग र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा नगएकाले आज पुगेर फर्केको हु ।’ मन्त्रालयले पठाएको योजना राष्ट्रिय योजना आयोगमा लिपीबद्ध भएर आइदिनुपर्यो भन्ने उद्देश्यले पनि दुईवटै ठाउँमा जानु परेको उहाँको भनाई छ ।
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव र योजना अनुगमन तथा मुल्याङ्कन महाशाखा सांसदले भरिभराउ थियो । मध्यान्न १२ बजे दैलेखका सांसदको फाइल बुझेर कर्मचारीले हेर्न भ्याएकै थिएनन् नुवाकोटका क्षेत्र नम्बर २ का सांसद नारायण खतिवडा टुप्लुक्क पुग्नुभयो । सांसद पुगेपछि योजना शाखाका अधिकारीले जनताको काम भन्दै सांसदको फाइल तत्काल अघि बढाउन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइरहेका थिए ।
सिंहदरबारमा बजेट माग्न सांसद, नेता र कार्यकर्ताहरुको ताँती छ । सांसद आ–आफ्ना लेटर प्याडमा विकासका योजना, खुद्रे आयोजना लेखेर बुझाईरहेका छन् ।
सांसद नारायण खतिवडाले पनि थप्दै भन्नुभयो “यो जनता भन्ने चिज सारै खतरनाक हुन्छ नि, यो आजै गरिहाल्नुपर्ने काम हो ।” संसदमा प्रि बजेटबारे छलफल चलिरहेका बेला बैठक नै छोडेर खतिवडा मन्त्रालय पुग्नुभएको थियो । उहाँजस्ता कयौ सांसद बैठक चलिरहेकै समयमा मन्त्रालयमा भेटिए । संसद बैठक चलिरहेका बेला मन्त्रालय किन ? प्रश्न खस्न नपाउँदै फिस्स हाँसेर नुवाकोटका सांसद खतिवडाले विकासको सूची नै सुनाउनुभयो ।
‘यो आर्थिक बर्षको बजेटमा यो भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नुवाकोटका लागि थप पाँच वटा बाटोमा प्राथमिकता दिनुपर्यो, ति बाटोलाई स्तरउन्नती सहित बाह्रै महिना यातायातका साधन सञ्चालन हुने गरि मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिदियोस् भन्ने मेरो चाहाना छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो अनुसार नै मेरा माग अगाडी बढेका छन् । ’
सांसद धारा, पानी, ढल बाटो, स्कुल बनाउँछु भनेर जितेका हौं, अनि हामीलाई कानुन मात्रै बनाऊ भन्न मिल्छ भन्दै स्थानिय सरकारले गर्ने कार्यक्रम सिंहदरबारमा मागिरहेका छन् ।
सिंहदरबारमा बजेट माग्न सांसद, नेता र कार्यकर्ताहरुको ताँती छ । सांसद आ–आफ्ना लेटर प्याडमा विकासका योजना, खुद्रे आयोजना लेखेर बुझाईरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाका अनुसार सांसदहरु लेटरप्याडमा योजना लेखेर मन्त्रीलाई बुझाइरहेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, ‘माननीय ज्युले आफ्ना फाइल र सुझाव दिनुभएको छ । मेरो जिल्लाका वा मेरो क्षेत्रका यि योजना धेरै महत्वपुर्ण योजना हुन् भनेर निवेदन आइरहेको छ । माननीय मन्त्री ज्युकहाँपनि धेरै निवेदन आएका छन् । तिनलाई हामीले सुरक्षित हिसावले राखेका छौ ।”
शहरी विकास मन्त्रालयमा पुग्दा पनि मन्त्रीलाई भेट्ने सांसदको लाईन नै थियो । करिव आधा घण्टाको पर्खाइमा पालो आयो, बाँके क्षेत्र नम्बर १ का सांसद महेश्वर गहतराजको । आधा घण्टा मन्त्रीसँग छलफल गरेपछि बाहिर निस्किनुभएका गहतराजलाई मैले सोधें, तपाईको योजना बजेटमा पर्ने भए त ? उहाँले भन्नुभयो ‘मन्त्री ज्यु बाँके जिल्लाबाटै निर्वाचित भएकाले पनि मैले भनेका योजना नपार्ने भन्ने हुँदैन। बाँकेको समग्र बिषयमा पनि उहाँलाई जानकारी नै छ । यस बारेमा उहाँसंग मैले धेरै छलफल पनि गर्दै आएको छु । यसमा मन्त्री ज्यु सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।’
सिंहदरबार भित्रका विभिन्न मन्त्रालयमा हिजो–आज सांसदको लर्को नै देखिन्छ । लेटर प्याडमा लेखेर विकासका कार्यक्रम सिफारिस गर्दै अर्थदेखि सबै मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई दबाब दिइरहेका छन् । संसदमा सांसदले कानुन बनाउने हो, विकास माग्ने होइन भनेर बहस पनि भइरहेको छ ।
तर तीनै सांसद धारा, पानी, ढल बाटो, स्कुल बनाउँछु भनेर जितेका हौं, अनि हामीलाई कानुन मात्रै बनाऊ भन्न मिल्छ भन्दै स्थानिय सरकारले गर्ने कार्यक्रम सिंहदरबारमा मागिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १, २०७६, ०३:४६:००